7 Febroary-NATAON-DRAJOELINA SORONA NY MADINIKA -
AccueilRaharaham-pirenena7 Febroary-NATAON-DRAJOELINA SORONA NY MADINIKA
Nomelohan’ny Fitsarana HAT higadra mandra-pahafatiny noho ny raharaha 7 Febroary ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Nampitifitra mpanao fihetsiketsehana no heloka niampangana azy. Isan’ny voaheloka tamin’izany koa ny jeneraly Raoelina ary ireo mpiambina ny lapam-panjakana tao Ambohitsorohitra.
Nanao ampamoaka manodidina ity raharaha 7 Febroary ity anefa ny kolonely Charles Randrianasoavina ka nanambara fa ireo mpiara-dia amin-dRajoelina no nitifitra ireo mpanao fihetsiketsehana avy teny amin’ny tafon’ny hotely lehibe iray eny Antaninarenina ka nahafaty azy ireo. Porofon’izany teny amin’ny lohany avokoa ny ankamaroan’ireo voan’ny bala. Manjavozavo tanteraka araka izany iny raharaha 7 Febroary iny. Samy manilika andraikitra na an-daniny na ny an-kilany. Ny zavatra tsy azo lavina manodidina iny 7 Febroary iny dia ny hoe nomanina mialoha ary natao mihitsy izay nitifiran’ireo mpiambina ny lapan’Ambohitsorohitra ho fanatanterahana ilay fivoriana niarahan-dry Marson Evariste, Augustin Andriamananoro, Haja Resampa, Harinaivo Rasamoelina, Organès Rakotomihantarizaka, Pierre Houlder, araka ny baikon’i Andry Rajoelina.
Nazava ny paikady nandritra io fihaonana izay notanterahan’ny hainoamanjery vahiny France 24 io fa tsy maintsy atao izay hisian’ny rà mandriaka hiampangana an-dRavalomanana Marc. Nalefa natao sorona teny Ambohitsorohitra ireo vahoaka madinika ary natao mihitsy izay nisian’ny rà mandriaka. Nirefodrefotra ny basy, nandriaka nanerana an’Antaninarenina ny rà, am-polony maro ireo namoy ny ainy, feno hipoka ny tranom-paty tetsy amin’ny HJRA.
Ny fanontaniana manitikitika ankehitriny dia ny hoe: “nihatsara tokoa ve ny fari-piainan’ireo vahoaka madinika natao sorona teny Ambohitsorohitra nandritra ny dimy taona nitondran’i Andry Rajoelina? Nihatsara ve ny fiainam-bahoaka nandritra iny Tetezamita iny? Iza no lasa miliardera sy manan-karena taorian’iny fanonganam-panjakana iny? Tsy nitondra fahavoazana ho an’ny firenena ve iny zava-nitranga ny taona 2009 iny? Mbola mendrika hitondra fanjakana ve ny olona nampanao sorona ny aim-bahoaka?”.